Imtixaannada kaaliyaha maamulka: 5 talooyin oo lagu gudbo | Sameynta iyo daraasadaha
Maite Nicuesa | 03/06/2021 23:19 | Mucaaradka
Diyaarinta mucaaradka waa mid ka mid ah mashaariicda uu xirfadle ku qiimeyn karo mar uun shaqadiisa. Tani waa caqabad adag, hase yeeshe, helitaanka boos joogto ah waxay fursad siineysaa inaad aragto xasilloonida shaqada.
Tartanku wuu sarreeyaa maaddaama musharixiin badani ay imtixaanka galaan oo ay dalbadaan meelo yar. Imtixaanada kaaliyaha maamulka ayaa aad loogu baahan yahay. Tababbarka iyo Daraasaadka waxaan ku siinaynaa furayaasha aad imtixaanka uga gudubto.
1 Si taxaddar leh u darso ajandaha oo dhan
2 Isticmaal qalab wax ku ool ah si aad wax u barato
3 Abaabulka mowduucyada
4 Eeg waqtiga imtixaanka
5 Si fiican u naso
Si taxaddar leh u darso ajandaha oo dhan
Mid ka mid ah halista ay leedahay in la diyaariyo mucaarad waqti kooban leh ayaa ah in aan loo baahnayn boos kasta oo ku habboon. Ma jiraan xeelado sixir ah oo lagu dhaafiyo mucaaradka dadaal la’aan. Barashadu waa furaha, laakiin qorshaynta ugu fiican sidoo kale waa lagama maarmaan. Mid ka mid ah yoolalkaaga waa inuu ahaadaa tan: waqti u hur ajandaha oo dhan. Fadlan la soco in ay jiri karaan xoogaa cusbooneysiin ah mowduucyada wicitaan cusub. Sababtaas awgeed, ajandaha la doortay waa inuu had iyo jeer noqdaa mid dhow.
Isticmaal qalab wax ku ool ah si aad wax u barato
Tusaale ahaan, farsamooyinka daraasaddu waa xubno waxtar u leh qoto-dheerida macluumaadka. Samee liistada farsamooyinka aad ku isticmaali karto hawshan: hoosta ka xariiq, aqrin sare, dib u eegid, jaantusyo, maskax-furid, qoraaloTechnique Farsamo kasta waxay dhameystirtaa kuwa kale. Shaxdu waxay si gaar ah ugu habboon tahay dib-u-eegista. Iyada oo loo marayo matalaad garaaf ah oo ku saabsan fikradaha iyo qodobbada ugu muhiimsan waxaad ku dhejin kartaa fikrado kala duwan oo xiriir ah.
Waxaad sidoo kale qiimeyn kartaa suurtagalnimada diyaarinta imtixaanka kaaliyaha maamulka iyadoo laga caawinayo akadeemiyadda. Xaaladdaas, ogow waxa ku gudbaya boqolkiiba ardayda xaruntaas la sheegay. Akadamiyad gaar ah, oo leh xirfadlayaal horey uga soo gudbay mucaaradka, ayaa kugu hagi kara hawshan.
Kalandarka waxbarashadu waa mid ka mid ah agabyada kaa caawinaya inaad waqtiga qorshayso. Saacadaha aad u hurto maaddo kasta waxay ku xirnaan doontaa, illaa xad, heerka kakanaanta. Waxaan horey kugula talinay inaad barato manhajka oo dhan, laakiin ku xir mawduucyada heer dhib ah.
Sidan, Waad u bilaabi kartaa nidaamka daraasadda waxyaabaha ku jira kuwa leh dhibaato dhexdhexaad ama sare ah. U daa su'aalaha kuu fudud ilaa dhamaadka howshan. Sidan oo kale, adoo ka bilaabaya waxyaabo aad u adag, waxaad naftaada ku dhiirrigelineysaa inaad ka gudubto caqabadaha aad kala kulanto jidka.
Eeg waqtiga imtixaanka
Aragtida maalinta mucaaradka waxay kaa caawin kartaa inaad maskax ahaan isu diyaariso xilliga imtixaanka. Layligan ku weheliso khibradda booqashada shaqsi ahaan deegaanka uu imtixaanku ka dhacayo. Tusaale ahaan, tag goobta si aad u aragto aagga.
Sidan oo kale, waxaad ku baran doontaa deegaankaas oo waxaad ku ogaan doontaa astaamaha qaar.. Mucaaradku wuxuu toos kuu geynayaa aagga raaxadaada. Sidaa darteed, sida ugu macquulsan, sidoo kale waa wax togan inaad heshid barroosinka kuwa la yaqaan.
Sida wareysiga shaqada ka hor laguugula talinayo inaad ilaaliso jawiga dhow, waxaad sidoo kale tusaalahan ugu wareejin kartaa qaab-dhismeedka gaarka ah ee imtixaanada tartanka ee kaaliyaha maamulka.
Daraasadu waa qayb ka mid ah mashruucaaga muddada-gaaban, waxay ku fadhidaa meel gaar ah waqtigaaga. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad ka jarto inta lagu jiro maalin maalmaha ka mid ah si aad hawsha dib ugu bilawdo dhiirigelin dheeri ah. Iyo, si la mid ah, waa wax wanaagsan in maalinta ka horreysa imtixaanka aad ugu raaxaysato si deggan, oo aanad baran. Shakigu wuu sii xoogeysan karaa, taas oo ka dhalata neerfaha caadiga ah ee keena ilaa maalinta imtixaanka, marka aad xoogga saarto dib u eegista.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Mucaaradka » Imtixaannada kaaliyaha maamulka: 5 talooyin oo lagu gudbo